Nhau - Mamwe matanho akakosha eiyo nzira yekukanda mune chaiyo kukanda!
Nemazvo Kudzingwa kwakajairika kukanda muitiro mune simbi vachikanda vagadziri, asi ikozvino kukura hakuna kufanana nevakawanda simbi castings uye simbi castings, asi nemazvo Kudzingwa kunogona kuwana yakaenzana chimiro uye nehurefu hwekukanda kunyatsoita.
Iyo yakajairika nzira yekunyatso kurasa ndeyekugadzira iyo chigadzirwa muforoma zvinoenderana nemufananidzo. Musiyano uripo pakati pekukanda nemazvo simbi ndeyekuti iyo simbi yekukanda inofanira kunge iine imwe nhanho yekugadzirisa, nepo kukanda kwakaringana kunogona kuve nemuganho kana kwete. Pakutanga wakisi pateni inowanikwa nekukanda, uyezve iko kupfeka uye sanding maitiro anodzokororwa pamuenzaniso wewax. Mushure mekunge ganda rakaomarara raomeswa, iro remukati rewakisi rinonyungudika. Iyi nhanho iri dewaxing, kuitira kuti uwane mhango; Mushure mekubheka goko, tinogona kuwana simba rakaringana uye kugona kwemhepo. Ipapo tinokwanisa kukanda chinodikanwa chesimbi mukati mevhu. Mushure mekutonhora, isu tinokwanisa kubvisa goko uye kubvisa jecha, kuti tiwane yakakwira-chaiyo yakapera zvigadzirwa.Tinogona kuita kupisa kurapwa kana kutonhora kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa zve zvigadzirwa.
Investment Kudzingwa maitiro:
1. Zvinoenderana nezvinodiwa nemadhirowa emushandisi, chakuumbwa chakakamurwa kuita chepamusoro uye chepasi concave muforoma, iyo inopedzwa nekugaya, kutendeuka, kuronga uye mamwe maitiro. Chimiro chegomba rekuumbisa chinofanira kunge chakaenderana nehafu yechigadzirwa.Nekuti iyo wax mould inonyanyo shandiswa kwemaindasitiri wakisi kuumbwa, isu tinofanirwa kusarudza iyo aruminiyamu chiwanikwa zvinhu zvine yakaderera kuomarara, yakaderera zvinodiwa, yakaderera mutengo, kurema uremu uye yakaderera nzvimbo inonyungudika seforoma.
2. Mushure mekusarudza yakanaka aluminium alloy zvinhu, tinogona kushandisa iyi aluminium alloy kuburitsa huwandu hukuru hwemaindasitiri wakisi yakasimba mamodheru.Pasi peyakajairika mamiriro, yakasimba solid yeindasitiri wakisi inogona kungoburitsa imwe isina chinhu chigadzirwa.
3. Kana wax wakange wagadzirira, zvinodikanwa kuti uchinje muganhu wakakomberedza iwo wakisi pateni. Mushure mekubvisa zvinhu zvisina basa pamusoro, zvinodikanwa kunamatira imwe wax pateni pamusoro wakagadzirirwa musoro.
4. Tine huwandu hwewax musoro musoro wakaputirwa neindasitiri inonamira, uyezve zvakaenzana sprayed neyekutanga rukoko rwemoto usingadziviriri uye yakanyanya kupisa tembiricha inodzivirira silika jecha .Rudzi rwemhando dzejecha idzi diki kwazvo uye dzakanaka, izvo zvinogona kuona kuti yekupedzisira pamusoro peiyo isina chinhu inotsvedza.
5. Wobva waisa pateni yewakisi mufekitori matinoisa tembiricha yemukamuri yekuomesa mweya chaiwo, asi haifanire kukanganisa shanduko yechimiro chemukati memwax. Nguva yekuomesa mweya chaiwo kunoenderana nekuomarara kwemukati meforoma. Kazhinji kutaura, yekutanga mhepo yekuomesa nguva ingangoita maawa mashanu kusvika masere.
6. Kana wax wakange wakaomeswa nemhepo, nhepfenyuro yeglue yekumaindasitiri inodiwa pamusoro penzvimbo yewakisi, uye jira repiri rejecha rinosaswa pamusoro. Iyo jecha zvikamu mune yechipiri dura rakakura uye rakawomarara pane iro rekutanga layer Mushure mekubata chepiri jecha, seyekutanga rukoko, ita zvakasikwa mweya kuomesa
7. Mushure mechipiri chejecha rikaomeswa, rechitatu dura, rechina dura uye rechishanu rukoko rwejecha nenyunje ichaitwa zvichiteerana.Sandblasting zvinodiwa: tinoda kugadzirisa sandblasting nguva zvinoenderana nezvinodiwa pamusoro uye huwandu hwe Kazhinji, kuwanda kwe sandblasting kuchave kungangoita 3-7 times.Chidimbu saizi yejecha rega rega rakasiyana, jecha reimwe neimwe maitiro rakashata kupfuura iro rapfuura, uye nguva yekuomesa mweya zvakare yakasiyana. iyo nguva yejecha pane yakazara wakisi pateni inogona kunge ingangoita mazuva 3-4.